पत्रकारहरूलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। Daphne Caruana Galizia को लागि अभियान
स्टिकी पोष्ट By Oliver Bienkowski पोस्ट अभियान संग2टिप्पणिहरु Permalink
पत्रकारहरूको संरक्षण। नि: शुल्क शब्दको लागि
स्टिकी पोष्ट By Oliver Bienkowski On 12। जनवरी 2018 संग2टिप्पणिहरु
#PixelHELPER Daphne Caruana Galizia को हत्यारों को समर्थन को गिरफ्तारी को लागि जानकारी को लागि 100.000 को प्रशंसा गर्दछ। कृपया हाम्रो अभियानलाई Pixelhelper.org/de/spenden मा समर्थन गर्नुहोस् IL-KENNIESA को साथसाथै हामी आईएल-केएनएनआईएसए विश्वव्यापी कार्यहरू योजना गर्दछौं जसले हत्याराहरूको बारेमा सूचना र सहभागी देशहरुमा मीडिया प्रबर्द्धन निर्माण गर्न हामी योजना बनाउँछौं।
"मेनिफेस्टो, अन्य रगतले लेखिएको" - अमेरिकी इतिहासकार माइक डेविस कार बम भनिन्छ। सबैभन्दा यी manifestos को हाल, Semtex शामिल पनि प्लास्टिक विस्फोटक, Bidnija मा एक driveway मा सेतो प्यूजिओट 108 तल संलग्न, 309 बासिन्दाहरू माल्टा गरेको राजधानी Valletta को एघार किलोमिटर पश्चिम रूपमा ज्ञात।
16 मा। अक्टोबर, डेफन कारुआ गिलिजिया, 53 वर्षको उमेरले उनको कारको पहिया लिन्छ। त्यो मुख्य सडक गर्न माटो सडक ड्राइव, बारी, बायाँ, तल समुद्रको टाढा glimmer देखि देख्न सकिन्छ जो देखि पहाडी एउटा सानो, जंगली landfill र zucchini एकड भूत, 270 मीटर, माथि रातो-सीमा साइन गर्न, जसमा एक हेजले चालकलाई सोध्दछ कि चालकले उनीहरूको समानतालाई झन्झटाउन सक्दैन। विस्फोटको विश्वास छ, मोबाइल फोनद्वारा ट्रिगर गरिएको छ। 15.04 घडीमा, Peugeots 100 मीटरको अवस्थित एक क्षेत्रमा सडकको दाँया तिर झर्काउँछ। सात डच अदालती Valletta Galizias लास को मेटर Dei अस्पताल मा तीन दिन पछि निरीक्षण गर्ने, विशेषज्ञहरु धेरै हेर्न प्राप्त छैन। देशको सबैभन्दा राम्रो ज्ञात र सबैभन्दा अस्पष्ट पत्रकारको शरीरको सानो बायाँ छ। त्यो उनको मृत्यु अघि 29 मिनेट उनको ब्लग मा पोस्ट गरेको थियो, उनको अन्तिम शब्द: "कुनै कुरा जहाँ तपाईं अब हेर्न: जताततै crooks छन्। यो निराशाजनक छ। "
एक हप्ता पछि, तीन छोराहरू ईयू संसद मा स्ट्रासबर्ग मा Galizias, माल्टा बारेमा र संभवतः ईयू मा उनको आमा को हत्या भन्छ बारेमा बहस। हरियो MP स्वेन गिइल्डले माइक्रोफोन लिन्छ। "डफन सडकमा मारेको थियो। त्यहाँ लुकेको ठाउँ थिएन, उनीहरूको हत्याराले दुर्घटनाको जस्तै आक्रमण लगाउने प्रयास गरेन। यसको विपरीत, यो शक्तिको क्रूर प्रदर्शन थियो, "उनले भन्छन्। "यो माल्टा पैसा शोधन र भ्रष्टाचार को सिस्टम मा एक प्रकाश फाले गर्ने Daphne थियो - यी अधिकारीहरूले थिएन।": यो बम प्रहरी प्रमुख वा अधिवक्ता सामान्य को कार अन्तर्गत थिएन किन स्पष्ट छ
स्ट्रासबर्ग मा स्मारक सेवा चलिरहेको बेला, गुलाबी Bindi, इटालियन विरोधी-माफिया आयोग को टाउको, Valletta शहर पर्खालहरु गर्न एक्सेलसियर होटल प्रवेश गर्छ। दिनको लागि माल्टा मा आयोग बाटो थियो, भ्रमणको लामो योजना थियो, तर अब, यस ब्लगर को हत्या पछि, ब्याज विशाल छ। चिल्लो gelled अंगरक्षक, कान मा सूट देखि पारदर्शी केबल स्क्रू घेरिएको, Bindi तालिका मा तल बस्छन र यसमा भारी छाला कुर्सियों मा प्रतीक्षा गरिएको छ जो पत्रकार मा देखिन्छ। माफिया भन्छ, माफी माल्टा को "सानो स्वर्गदूत" को रूप मा देख्छ। र "वित्तीय सेवा प्रदायक जसले माल्टा मा व्यवसाय खोल्न प्रस्ताव गर्न सक्छ" पनि "समस्या को भाग" हुन्।
माल्टाको लागि बन्दीको विवरणहरू समस्या हुन्। उनी दशैंका लागि इटाली माफियामा एक विशेषज्ञ थिए, त्यसैले उनको शब्दको वजन छ। माल्टा गिलिसियाको हत्या पछि यसको प्रतिष्ठाको लागि लडिरहेको छ।
उनको हत्या, धेरै को रूप मा यो द्वीप मा देख्न, एक मनिच थियो कि अपराध विरुद्ध लडाइँको बारेमा गम्भीर छन् माल्टा को बारे मा अब निश्चित छैन।
दश वर्षका लागि कर चोरीमा संलग्न गीगोल्ड र गिलिजियाको अनुसन्धानलाई थाहा छ, अन्तर्राष्ट्रिय अन्वेषकहरूको लागि पठाइरहेको छ। उनी समाजवादी प्रधानमन्त्रीको जोसेफ मुस्कुटको इस्तीफा लिन आग्रह गर्छन् र युरोपेली संसदले माल्टालाई "कानून नियम पुनर्स्थापना" गर्न एक प्रतिनिधिमन्त्री पठाउन चाहन्छ।
त्यो केवल एकमात्र होइन, जसले त्यो बाटो देख्छ। द्वीप राष्ट्र बारेमा यी दिन रिपोर्ट गर्दा, त्यसपछि कालो पैसा कुरा, खोल कम्पनीहरु, कर havens, एक गाढा अजरबैजान जडान, तेल smuggling, पासपोर्ट बिक्री र अनलाइन जुवा को। गिलिजियाको सबैभन्दा ठूलो इतिहासले पनि यो योगदान गर्यो। उनको छोरा मैथ्यू अनुसन्धान नेटवर्क IJIC मा काम गर्दछ, जसलाई 2016 को पनामा पत्र को अनावरण गरियो। उनको बारेमा ग्यालिजिया माल्टा सम्बन्धी कागजातहरू प्राप्त भयो। मात्र ऊर्जा, पर्यटन आज मन्त्री - - अगाडि कम्पनीहरु ब्रिटिश भर्जिन टापुहरू र पनामा मा कुरा थिए त्यो केथ Schembri, प्रधानमन्त्री मस्कट को मंत्रिमंडल को प्रमुख, र आफ्नो सहयोगी Konrad Mizzi फेला पारेका। यो सबै राजनीतिज्ञ, विवादास्पद सरकार राजस्व स्रोतहरु को शंकास्पद निजी व्यापार र संगठित अपराध बीच सीमाहरु भंग जस्तो देखिन्छ जो एक उदास चित्र मा सँगै बग्नेछन्।
को दैनिक मार्फत, एक अतुलनीय खुला हावामा मध्यकालीन संग्रहालय - यो गरिबी कार-मुक्त, बालुवा-रंग पुरानो नौ हप्तामा युरोप सांस्कृतिक राजधानी हो जो टाउन, संग, व्यवसायी र tanned विद्यार्थीहरूको भरिएका छन् जो उपनगर Valletta, संग मेल खाने एउटा छवि छ यसको रंगीन pennants संग पर्यटक दसौं हजार आफ्नो मानक को क्रूसेडरों रूपमा guidebooks पालना र त्यसपछि साँझ, सेन्ट जुलियन मा समुद्र स्प्रे को छर्कनु गरौं खुसी खाडी को अन्य पक्षमा रेड वाइन मा खरायो खान र hinterherzukippen Cisk स्टक pintweise गर्न।
तिनीहरूमध्ये केही योना जोनाथन फेरिसको अवलोकन गर्छन्। गिलिजियाको मृत्यु पछि आठवें दिनमा, उनी वेस्टिन ड्रैगनराको लबीमा निलो सूटमा पतली चश्मेहरूसँग बस्छन्। काँचको मुखमा पछाडि, लहरहरू चट्टानहरू हिउँदिएका छन्, सोफेहरूमा नाविकको लुगामा राम्रा परिवारहरू बस्छन्। फेरिसले पाँच-तारा होटलको सुरक्षा प्रमुख, र यो सुझाव दिन्छन् कि चीजहरू माल्टामा बाटो लागेन।
किनभने एक वर्ष पहिले फेर्से पुलिस अफसर थियो, पैसा लन्डनिंगको लागि जिम्मेवार। ग्यालिजियाको ब्लग, उनी भन्छिन्, सँधै उनको खोजीमा सहयोग पुर्याएको छ। "उनीहरूले चीजहरू जान्थे जुन हामीले थाहा थिएनौं। मानिसहरू प्रहरी अधिकारीहरू भन्दा माथि पत्रकार विश्वास गर्छु। "Ferris सहयोगिहरु ब्रसेल्स, चीन, जर्मनी मा प्रशिक्षित, उहाँले नोभेम्बर 2016 मा Gaddaffis लेखापाल नेतृत्व उहाँले माल्टावासी विरोधी-धन शोधन अधिकार (FIAU) को टाउको रूपमा प्रतिस्थापित। मार्च 2016 र जुलाई 2017 बीच सरकारी अधिकारियों को बिरुद्ध भ्रष्टाचार संदेह को चार रिपोर्टहरु लाई लेखेको छ। सबै, फेरिस भन्छन्, ग्यालिजियाको अनुसन्धानमा आधारित थियो। कसले उनको पछि लाग्न चाहन्छ, यदि त्यो विवरणमा जान्छ भने समय लाग्छ।
को FIAU अध्ययन को छोटो संस्करण कसरी: मन्त्री मुख्य केथ Schembri पनि उहाँले रूस तीन मालटिस् पासपोर्ट को बिक्री देखि cashed जो 100.000 यूरो, लुकाउन पनामा मा आफ्नो मेलबक्स कम्पनी प्रयोग। उनले माल्टीय अखबार प्रबन्धकलाई अर्ब एक लाख यूरो तिर्नुभयो। फेरिसको विश्वास छ कि स्किमबरीले यो सुनिश्चित गर्न चाहन्थे कि सरकारको अखबारले बसालेको छ। त्यसोभए उहाँ यकिन गर्न चाहानुहुन्छ कि कागजले उनको कागजबाट उनको कागज प्राप्त गर्न जारी राख्दछ, किनभने द्वितीयक व्यवसायमा सिमानब्री पनि एक पेपर बिक्रेता हो। र: स्क्यामबरी र पूर्व ऊर्जा मंत्री कन्नरा मिजिजले दुबईबाट रिश्वत कम्पनीबाट बोल्नुभयो जो माल्टामा दलीय ग्यासको व्यापार गर्दछ। यो पैसा पनि दुई को पत्रबाकस कम्पनीहरूमा फैलिएको थियो। गिलिज्जको अन्तिम ब्लग प्रविष्टि "सबै ठाँउ बदलिन्छन्" यी व्यवसायहरूलाई उल्लेख गरिएको छ।
गैस ठेकेको लागि 1,07 मिलियन यूरो?
स्किमब्रिरी र मिज्जीले सबै कुरालाई इन्कार गर्छन्। माल्टा मा कानून नियम को बारे मा धेरै संदेह छ कि: FIAU को रिपोर्टहरु या त पुलिस को पठाए - या सीधे अधिकारियों द्वारा दायर - अधिकारियों द्वारा। तिनीहरू कुनै परिणाम थिएनन्।
रिपोर्टहरुमा फेरिस, उनको सहयोगी चार्ल्स क्रोनाइन या पूर्व एफआईयू मालिक मैनफ्रेड गैलेड शामिल थियो। अब कुनै पनि कार्यालयमा छैन। ग्यालडजले आफ्नो निस्सन्देह, प्रारम्भिक सेवानिवृत्तिमा गए। 16 मा। जुन 2017 ले आफ्नो उत्तराधिकारी फेरिस र क्रोनिनलाई धितो मा उनको नोटिस संग एक सफेद लिफाफा धक्का दिए। फेरिस भन्छन्, "मलाई कहिल्यै थाहा थिएन।" त्यसोभए उहाँ मात्र सुत्न सक्नुहुनेछ। FIAU ले टाज भन्छ कि यसमा "फेरिस र क्र्रोन" प्रदर्शनका कारणहरू "खारेज गर्न यसको सबैभन्दा राम्रो चासो हो।"
यदि उसले FIAU संग रह्यो भने, उसले ग्यालिजियाको अन्तिम महान इतिहास पछ्याएको थियो, फेरिस भन्छन्। यो प्रमुख पत्नीको मिशेल मुस्कुटको बारेमा थियो। उनको कम्पनी एग्रीन्ट इन पनामामा अजरबैजान-जस्टिन पछि औतिनियनबाट यूरोको 1,07 लाख उडान भएको छ र अजरबैजानले 18 वर्षको साथ ग्यास वितरणको लागि एक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। "तिनीहरू यो अनुसन्धान रोक्न चाहन्थे," फेरिसले विश्वास गरे। उनले उनलाई पुन: स्थापित गर्न भ्रष्टाचारको अधिकारलाई सम्बोधन गरे।
त्यो FIAU रिपोर्टहरू पनि ज्ञात थिए, एक व्यक्तिको कारण हो जुन आफैले "राजनीतिमा डफनका समकक्ष" लाई बोलाएर उनीहरूको विवेक थियो। सिमोन बसटलिल्ट रूढिवादी पीएन, एकमात्र विपक्षी पार्टीको डिप्टी हो; एक अमेरिकी युएस टेलिभिजन प्रचारक को शैली र आवाज संग एक व्यक्ति, उनको मंदिरहरु लंगो मा काले रंग को रोशनी लेस मल। "केवल व्हाट्सएप मार्फत समाचार," उनी भन्छन्। "मेरो फोन निगरानी गरिँदै छ।" आगामी संसदका सभाहरूमा विपक्षको सम्मेलन कक्षमा दर्शकहरू अभिवादन गरिएका छन्, एक एक्वैरियम जस्तो ठाउँ जुन Valletta को पैदल यात्रीको सडकमा हुन्छ।
गैलिजिया सरकारको विरुद्धमा थप सामग्री हटाइएपछि प्रधान मंत्री मस्केटले अन्तिम जूनको चुनावलाई प्राथमिकता दिए। बसुतीली विपक्षीको शीर्ष उम्मेद्वार थियो। कसैले तिनलाई FIAU रिपोर्ट गरे। Busuttil सबै विवरण प्रेस को सामने रेशम संग फैलिएको छ। यसले मद्दत गर्दैन: मालटिस् मास्कट वफादार बने। माल्टाको अर्थव्यवस्था बढिरहेको छ भन्ने तथ्यले गर्दा बिटुटेल खोएको छ। "त्यस पछि, म बिस्तारै राजनीतिबाट हटाउन चाहन्छु," उनले भन्छन्। "तर अब, उनको मृत्यु पछि, सबै कुरा फरक छ।"
जुलाईमा, Busuttil ले मन्त्रीहरूको खोजी गर्न पुलिसको लागि उत्साहित छ। स्किमब्रिरी र मिजोरजीले आपत्ति जनाएका छन्। "यदि मैले हारें भने, म स्ट्रासबर्ग जान्छु," Busuttil भन्नुहुन्छ। उसले गिलिजियाको काम पूरा गर्न चाहन्छ।
ब्लगरले मास्कट, बाकी सरकारको साथसाथै विपक्षीहरूको ठूलो वर्गलाई आक्रमण गरेको छ। "शानदार लेख" संग भाग, साम्राज्य दल पी को मुख्यालय मा उनको खराब दुश्मन पनि भन्छन्। आंशिक व्यक्तिगत आक्रमण र उनको यौन जीवनको बारेमा पाठहरूको साथ। तर माल्टा मा कसैलाई पनि गम्भीर मानिन्छ कि यो भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरू जसले आफ्नो कारको छेउमा बम अट्छ।
माल्टा र इटालीमा प्रायः सामान्यतया सुनेको कुरा हो - गिलिसियाले लेबियाबाट दक्षिणी युरोपबाट तेलको तस्करी गर्न मफियाको खोजीमा लागेका छन्। यो धारणाले यस तथ्यलाई समर्थन गर्दछ कि गत दुई वर्षमा माल्टा मा पाँच कार बम आक्रमण भएको छ जसका पीडित अपराधी मिडियाले जनाएको छ। कुनै पनि सूचित थिएन। प्रत्येक समय सिम्टेक्स प्रयोग भएको थियो। यो उत्पादन गरिएको छ, उदाहरणका लागि, लिबिया जौरामा - जहाँ मुग्लिन तेल बाट आएको हुन्छ।
यद्यपि, माल्टाका धेरै मास्कट गिलिसियाको मृत्युको लागि जिम्मेवार हुन र इस्तीफा लिन खोज्छन्। यति धेरै छैन किनकि प्रहरीले ग्यालिजियाको रक्षा गर्दैन। वास्तवमा, ब्लगरले विगतमा पुलिसलाई खारेज गरेको छ किनभने उनी डरलाग्दो थिए कि यसले उनको कामलाई असर गर्नेछ। मस्कट, को Galizias परिवार, विरोध र मालटिस् पत्रकार मा allege, Busuttil रूपमा formulated उप निम्नानुसार: आफ्नो व्यापार सहनु गर्न, कमजोर बनाइरहेका "। केही भ्रष्टाचार विरुद्ध, लामो रूपमा भ्रष्ट मन्त्रीहरु कार्यालयमा रहनुपर्छ गर्न सकिन्छ" राज्य गरेको संस्थाहरू - र यसरी संगठित अपराधीहरूको व्यापार सहन।
तथापि, परिस्थितिमा विरोध अनइनल हुँदैन। माल्टा आर्थिक रूपमा अत्यन्त कम कम कर्पोरेट कर, अनलाइन जुआ उद्योग र अमीर विदेशीहरूलाई पासपोर्ट बिक्री गर्नमा निर्भर गर्दछ। बसुटोली पीएनले योगदान दिन्छ। "माल्टाले आफ्नो सार्वभौमिकतालाई गहिरो पैसा बेचेको छ," ग्रीन गिइल्ड भन्छन्। "यसले राजनीतिक र वित्तीय अभिजात वर्गहरू बीच प्रतिरक्षा र क्रान्तिवाद संस्कृतिको साथ कानुनको शासनलाई बदलेका छन्।"
माल्टा मा क्यासिनोस्टाड्ट सेन्ट जुलियन्स मा मेफेयर परिसर, टापु मा धेरै कार्यालय भवनहरु मध्ये एक छ, जसमा अन्तरराष्ट्रीय निगमहरु को नाम मेलबक्स मा पनि छ। निर्माणमा भएका कम्पनीहरू "माल्टा फाइलहरू" को विषय हो, अन्तिम मईको दर्पणमा रिसाक थियो। पाठले उल्लेख गर्यो कि स्पाइगल व्यक्तिहरू दु: खी थिए, कार्यालयका प्लेसहोल्डरहरूले दावी गरे कि त्यहाँ वास्तविक व्यवसाय थियो। आज, छ महिना पछि, मेयरफियर फेलरको छवि एउटै हो: K + S, Sixt, BASF र याकूब - विश्वव्यापी निगमहरूको सहायकहरूको रिक्ति पत्रबक्सहरू, सबै त्यहाँ अझै पनि।
माल्टा मा मुनाफा कमाई बन्द गर्दछ: मार्केट मा माल्टा द्वारा लिइएको 35 प्रतिशत को, यो 30 प्रतिशत को जम्मा हुन्छ; यो5प्रतिशतको बारेमा मात्र अद्भुत कुरा हो। माल्टा एक "गंदे स्थान" हुनेछ, ग्यालिजियाले यसको बारेमा लेखेका थिए।
वित्त मंत्री शर्मिंदा छैन
माल्टा आज दैनिक दैनिक समाचार पत्र को गणना गरेको छ कि 2015 ले माल्टा देखि4अरब यूरो को मुनाफा प्राप्त गरेको छ। देशले केवल 250 मिलियन कर को तहत स्वीकार गर्यो। 1,4 अरबहरू अन्य खजानाहरूमा गुमाएका थिए। माल्टाको वित्त मंत्री एडवर्ड स्किकलोनाले आफ्नो टाउकोमा हिर्काउँछ। "माल्टामा, जर्मनीमा भन्दा बढी एक वेतन जब मजदुरहरू हो, यहाँ कामदारहरूले आफ्नो मजदूरीको चार-पाँचौं भन्दा बाहिर धोका दिएका छन् भन्न सक्छन्? अवश्य होइन, "स्किसलोना भन्छिन्। "त्यहाँ एक धारणा समस्या हो।" उनको देश अनुचित रूपमा उपचार गरिरहेको छ, उनको कर प्रणाली "गलत बुझ्यो।" देश कर करार छैन तर "प्रतिस्पर्धी" कर दर प्रदान गर्दछ। "के यो शर्मनाक हुनु पर्छ?" उहाँले सोध्नुहुन्छ। "होइन!" वास्तवमा, कम्पनी मालिकले5प्रतिशत भन्दा बढी तिर्नेछ - किनभने तिनीहरूले घरमा आफ्ना सहायकहरूको उच्च मुनाफामा कर तिर्न पर्छ।
त्यो यो वास्तवमा हुन्छ, तर कुनै पनि सुरक्षित छैन, ग्रीन गिइल्ड भन्छन्। "माल्टाले आफ्नो कर फायदे प्रदान गरे तापनि दोस्रो करणको लागी आउँछ।" कत्ति आकर्षक यो द्वीपमा विदेशी कम्पनीहरूको उच्च संख्यामा पढ्न सकिन्छ।
तर जर्मन ठूलो निगमहरूको "सीमित" बन्द गर्न - स्किकलोना भन्छिन्, त्यहाँ कुनै कारण छैन। "यो बिल्कुल वैध कानूनी छ।" सबै राजमार्गमा मुद्रा लन्चिंग हुन्छ। "तर ठूला व्यक्तिले साना व्यक्तिहरूलाई आफ्नै समस्या लुकाउन दोषी ठहराउँछन्।" माल्टाको कानुनी व्यवस्था ईयूलाई सामेल गर्नुअघि जाँच गरिएको थियो र देशलाई पैसा लन्डनिङ लुफोको लागि नियमित रूपमा जाँच गरिएको थियो। यसले बैंक गोपनीयतालाई रद्द गर्यो र ईआईटीको पैसा-पैसा लाउन्डिङ निर्देश ATAD लाई स्वीकृत गर्यो, स्किकलोना भन्छ। "साथै, हामी विदेशबाट अनुरोधमा सबै जानकारी प्रदान गर्दछौं।"
गिलिजियाको मृत्यु पछि नौौं दिन, प्रिमियर मस्कट दुबईमा "ग्लोबल नागरिकता" संगोष्ठीमा प्रदर्शन गरिनेछ। यो Henley र पार्टनर द्वारा होस्ट गरिएको छ - एजेन्सी जसले 900.000 यूरोको एक एकाइ मूल्यमा माल्टाको पासपोर्ट बेच्दछ। लगानी द्वारा नागरिकता कार्यक्रम को नाम हो। "वैकल्पिक जीवन र नागरिकता" फाइदाहरूको बारेमा मस्कट वार्ताहरूले अभिजात वर्गहरूमा ल्याउँछ।
पास काला काला को लागि बेचन
"रसिया र मध्य पूर्वका डार्कका व्यक्तिहरू" "नकली माल्टीमा" बनाइनेछ, "गिलिजियाले लेखेका थिए। तिनीहरूका लागि, पासपोर्ट व्यवसायको काले काले रकमको लागि अर्को गेटवे थियो। वित्त मंत्री Scicluna त्यो स्वीकार गर्न चाहँदैनन्। लाखौं विदेशीहरूले हरेक वर्ष यूरोपीय संघका भिसा प्राप्त गर्नेछन्। "केहि सय कि माल्टा बेचिएको छ अब सम्म तथ्याङ्कमा पनि देखा पर्दैन," उनले भन्छन्। तिनीहरू "सामान्यतया कलाकार वा एथलीटहरू जुन विश्व नागरिक हुन चाहन्छन्" भन्ने हुन्।
गुणको उत्पत्तिको रूपमा सबै भन्दा कम शंकालाई अस्वीकार गरियो, जुन प्रत्येक चौथो आवेदनको साथ थियो। यसबाहेक, Scicluna भन्छन्, ईयू आयोग ले यो कार्यक्रमको जाँच गरेको छ र कुनै वस्तु छैन। "अन्य देशहरूले ईयू सील बिना नै गर्छ, तर तपाईले तपाइँको औँलालाई बिर्सन्छ।" वास्तवमा यो केवल अस्ट्रिया मात्र होइन जुन त्यही पद्धतिबाट पास हुन्छ। जर्मनीले इमर्जेन्ट गर्न स्वत: नियोजित गर्न कम्तिमा एक लाख यूरो लगानी गर्दछ।
ब्लगरको मृत्यु पछि ग्यारहवर्षको साँझमा, महिलाहरु प्रधान प्रधानमन्त्री मस्केटको उत्कृष्ट कार्यालयको कार्यालयमा भेला हुन्छन्। बिटल्सले सानो स्पीकरबाट भाडा लिन्छन्। यहाँ धेरै PN को हुन्छन् वा उनीहरूको वातावरणबाट आउँछन्, तर कसैले यो सुन्नु हुँदैन। तपाईंको कार्य "निस्क्रिय" हो, निस्सन्देह। तिनीहरूले माट चलाउँथे र तम्बू राखे। लामो समय उनीहरूले स्थान कब्जा गर्न चाहन्छन्। सबैजना एउटै सेतो टी-शर्ट पहिरन लगाइन्छ। "कुनै कुरा जहाँ तपाईं हेर्नुहुन्छ, त्यहाँ सबै ठाँउहरू छन्। यो निराशाजनक छ ", यो भन्छन्।
पत्रकारहरूको संरक्षण। नि: शुल्क शब्दको लागि जनवरी 26th, 2019Oliver Bienkowski
Tagged: संघीय Chancellery, Daphne Caruana Galicia, पत्रकारहरूलाई सुरक्षित राख्नुहोस्
Pingback: बोममर्मनको उर्दू-शर्मेचिचिटिट टर्कीको दूतावासमा प्रख्यात छ मिसिनहरु जस्तै ड्रेस
Pingback: बोर्ममर्मनको उर्दूको प्रक्षेपण टर्कीका दूतावासमा शर्मिणी कविता